टप नेपाली जोक्स – Top Nepali Jokes – Page3– MeroJilla.com
अत्याधिक सेक्स गर्ने महिला बढी बुद्धिमानी :क्यानाडाको रिसर्च Tuesday, September 19th, 2017
असोज ३ । एक नयाँ अध्ययनले महिलाहरुले अत्यधिक सेक्स गर्नाले उनीहरुको स्मरण शक्ति बढ्ने देखाएको छ । क्यानाडाको म्याकगिल युनिभर्सिटीको रिसर्चका अनुसार सेक्सले महिलाहरुमा शब्दहरु सम्झिने शक्तिमा वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ । सो अध्ययनले पेनिस वजाइनल इन्टरकोस (पिविआइ) एक स्वस्थ युवा महिलाको स्मरण कार्य राम्रोसँग हुने देखिएको छ । यस अघि यहि किसिमको अध्ययन पशुमा गरिएको..
यौनकेश यस्तै १० देखि १५ वर्षको उमेरमा आउन थाल्छ ,यौनाङ्गको रौं हटाउँन हुन्छ कि हुदैन ? Monday, September 18th, 2017
डा. राजेन्द्र भद्रा मेरो यौनांगमा लामो घुमाउरो रौं छ, जुन चाँडो-चाँडो बढ्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला ? अन्य जनावरको तुलनामा मानिसको शरीरमा रौं कम हुनेजस्तो देखिए पनि राम्रोसँग नियालेर हेर्ने हो भने केही ठाउँ छोडेर हाम्रो शरीरको सतहभरि नै रौं हुन्छ । हत्केला, पैताला, औंलाको टुप्पोको पछिल्तिरको भाग, ओठ, लिङ्ग मुन्ड, भगांकुरको मुण्ड तथा सानो भगोष्ठको भित्री..
२ असोज । प्राय:सबैजसो महिलाहरु आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा योनी चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन्। कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चिलाइराख्नु वा बारम्बार चिलाइराख्नु भने राम्रो होइन। योनि चिलाउने समस्या धेरै कारणबाट हुन सक्छ । ती मध्ये प्रमुख कारण योनि राम्रोसँग सफा नगर्नाले यो समस्या उत्पन्न हुन जान्छ भने जथाभावि यौन सम्बन्धबाट हुने यौन रोगबाट..
पीडा कम गर्न सेक्स, भेटीयो अनौठो रोग Friday, September 15th, 2017
एजेन्सी । के तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छ कुनै महिला वा पुरुषले पीडाका कारण सेक्स गर्छन् । उसको यौन शक्ति देखेर साथीलाई कुनै झट्का लागेको सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यहाँ त्यस्तै महिलाका बारेमा उल्लेख गरिँदैछ, त्यो पनि यसकारण कि यी महिला विचित्र रोगबाट पीडित छिन् । यो रोगका कारण खुट्टा र पेटको तल्लो भागमा असैह्य पीडा हुन्छ, यो पीडा कम गर्न उनी आफ्नो पार्टनरका साथ हरेक दिन यौन..
सेक्स समय बढाउन चाहनु हुन्छ ? लिंगमा यी तेल दल्नुस् Monday, September 11th, 2017
अधिकाँश पुरुषहरु आफ्नो लिंगलाई कसरी ठूलो बनाउने र सेक्स पाटर्नर र आफू स्वयंलाई कसरी बढीभन्दा बढी सन्तुष्टि दिलाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित हुने गरेको पाइन्छ । यौनसम्पर्कको समयलाई बढी आनन्ददायी र लामो बनाउन उत्पादन भएका लिंगको मसाज गर्ने तेलहरु सबैभन्दा बढी बिक्री भएका छन् । बढ्दो सामाजिक सञ्जालको लतका कारण मानिसमा अत्याधिक मात्रामा हस्तमैथुन गर्ने बानी परेको छ । पुरुषहरुले..
२६ भाद्र । मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट मुक्ति वा फाइदा हुने देखाएको छ । नियमित सेक्स गर्दा के के फाइदा हुन्छः टाउको दुख्नेः नेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित सेक्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा..
साउदीमा मिनिस्कर्ट लगाएर ‘सनसनी’ मच्चाउने महिला
२६ भदौ । साउदी अरबको राजधानीबाट उत्तरतर्फको ऐतिहासिक मानिएको एक गाउँमा यसै साता ती महिलाले ‘मिनिस्कर्ट’ लगाएर घुमेको दृश्यलेइन्टरनेटमा सनसनी मच्चिएपछि प्रहरीले व्यापक खोजी अभियान चलाएर पक्राउ गरेको थियो । साउदीमा महिलाले लगाउने पारम्पारिक पोसाक (इस्लामिक राजकीय ड्रेस कोड)को ती महिलाले उल्लंघन गर्दै अतिछोटो पोसाक लगाएर समाजमा हिंसा मच्चाएको प्रहरीले आरोप लगाएको..
नेपालीहरु सेक्स गर्न जान्दैनन्, सेक्सका लागि नाङ्गो हुनु अनिवार्य’:डा करुणा Sunday, September 10th, 2017
नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिंदैन । यौनका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, वा त्यसलाई असाध्यै जटिल वनाईन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जनको विषय । फ्रायडले धेरै अघि मानिसका सबैजसो क्रिया यौनमा आधारित हुन्छ भन्ने ब्याख्या गरिसक्दा पनि फ्रायड पढेका नेपाली बौद्धिक वर्गले पनि यसलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । यो..
तँपाई कतै च्याट मा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ ख्याल गरौं यस्तो नहोस Saturday, September 9th, 2017
आज हामी एक बिशेष प्रशंग मा कुरा गर्दै छौ । इन्टरनेट को प्रयोग संगै थुप्रै कुरा हरु को विकास् भयो तर मानिस हरु को सोच मा उही कुरा छ अझै उही आचरण ले छोडेको छैन । हामी सम्झने गर्दछौ कि सबै जना हामि जस्तै सोझो अनि इमान्दार हुन्छन तर वास्तव मा संसार यस्तो छैन । सबै को कुरा को सहजता संगै थुप्रै प्रतिकुलता पनि जन्मिसकेको छ । यो त भयो केहि जीवनशैली को बारेमा अब लागु हामी हाम्रै प्रशंग..
म्याग्दीवासी रेडपाण्डाको संरक्षण अभियानमा Thursday, August 31st, 2017
म्याग्दी, १५ भदौ । बनजंगलमा टुसा खोज्न जाने स्थानीयले घरेलु हतियारको प्रयोग गरेर शिकार गर्ने गरेका थिए । पहिचान र प्रचार–प्रसारको अभावमा स्थानीयले शिकार गर्ने गरेको भएपनि विश्व बन्यजन्तु कोषको सहयोग तथा हरियो बन कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग मार्फत रेडपाण्डा नेटवर्क र हिमाली संरक्षण मञ्चले गरेको खोजीमा जिल्लाकै अति विकट मानिने लुलाङ र गुर्जाको मरेनी, जलजला सामुदायिक बन तथा..
कतै तपाईंलाई सेक्स लत लागेको त छैन ! Monday, August 28th, 2017
सेक्स गर्न मन लाग्छ । महिलालाई देख्नेबित्तिकै उत्तेजना आएको महसुस हुन्छ । या अश्लील चलचित्र हेर्न मन पर्छ । यदि यसो हो भने सेक्स लत लागेको हुन सक्छ । धूमपान, मदिरापान, चिया जस्ताको लतजस्तै यो पनि एक किसिमको लत हो । सेक्स एक प्राकृतिक क्रिया हो । तर, सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने हरेक बानी सामान्यभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसले व्यक्तिमा नकारात्मक असर छाड्छ । जब यौन क्रिया नियन्त्रणभन्दा..